Antanimena, Behoririka, Soarano…: mitondra ny heviny momba ny fandaminana ireo mpampiasa lalana - ewa.mg
News - Antanimena, Behoririka, Soarano…: mitondra ny heviny momba ny fandaminana ireo mpampiasa lalana
Manoloana ny fanovana
ny lalana sy fiatoan’ny taxi-be maromaro eny Antanimena sy ny
manodidina, milaza ny heviny ny mpampiasa lalana. Misy ireo tena
afa-po ary ny sasany mahita fatiantoka
Maholy, Mpianatra eny
Mipetraka any Soavimasoandro aho
ary mandeha taxi-be isan’andro. Tsikaritro aloha dia tonga aloha
kely any am-pianarana noho ny isan’andro aho taorian’io fanovana
io. Tamin’ilay alarobia voalohany iny aho tarabe vao tonga fa
taorian’izay nalalaka ny lalana. Rehefa mody kosa tena lasa
alavitra ny fakana taxi-be satria tsy maintsy eny amin’ny Jesosy
Mamonjy no maka izany. Rehefa avy ny orana no tena hijaly izahay
mpianatra sady ranobe eny. Amin’ny ankapobeny kosa mahafinaritra fa
tsisy fitohanana intsony.
« Livreur » na ireny
mpanatitra entan’olona ireny no asako. Mivezivezy eran’Antananarivo
aho ary moto no ampiasaiko, indrindra ety Antanimena satria ireo
mpiasa amin’ny birao ety no tena fanaterako entana. Nampilamina ny
fifamoivoizana ny fanovana nentin’ny kaominina. Tsisy fitohanana
intsony na Ankadifotsy na Antanimena. Mbola miambakavaka
indraindray amin’ilay tsy mbola tena zatra fa mandeha tsikelikely
eo iny. Tokony mba hasiana vahaolana koa ny eny Anosizato sy
Anosibe iny fa tena mandany fotoana ny fitohanana eny.
Mpivarotra maska na arovava orona
mandehandeha teo Antanimena teo aho. Maromaro izahay samy manana ny
karazan’entana amidiny. Fatiantoka ho anay ny tsy fisian’ny fiara
mandalo eny intsony. Tsisy intsony mihitsy ny fitohanana. Tena
milamina ilay tanàna, saingy maty teo koa ny tsenanay. Tsy maintsy
hitady toerana hafa hivarotana indray. Tsy mbola manana tsena
ara-dalàna izahay hatreto hanohizana ny asa fivelomana. Amin’ny fo
tsy miangatra kosa anefa, azo tsapain-tanana ny fiovana sy
Nanatsara zavatra betsaka ity
fanovana lalana ity. Tsy mirotoroto intsony fa misosa tsara ny
fifamoivoizana. Veloma hatreo ny fitohanana. Amin’ny maraina
amin’ny 7 sasany no fandalovako eo Antanimena isan’andro mamonjy
asa, malalaka ny lalana. Mody aho amin’ny 6 hariva tena mbola
mikodana tsara ny fifamoivoizana. Betsaka ny tombony azoko
amin’izany. Fotoana, fandriampahalemana eny an-dalana…Tsara mba
hitarina amin’ny toeran-kafa toy ny eny Rasalama sy Besarety,
Andravoahangy rehetra iny fa eny koa mitohana be.
L’article Antanimena, Behoririka, Soarano…: mitondra ny heviny momba ny fandaminana ireo mpampiasa lalana a été récupéré chez Newsmada.
Fanarian-janaka: tsy latsaky ny telo ny tranga tao anatin’ny herinandro
Tao anatin’ny herinandro monja izay, tsy latsaky ny telo ny zaza hita narian’olona teny an-dalana teny. Tsy fantatra mazava ny tena antony anaovan’ireo ray aman-dreniny izany saingy mateti-piseho. Tsy eto an-drenivohitra ihany anefa no itrangan’izany fa hatrany amin’ny faritra mihitsy. Misy amin’ireo zaza ariana no mbola menavava, fonosin-damba, atao anaty “sachet” ary ariana vao maraina eny amin’ny toerana mangingina. Tranga iray ny alatsinainy teo teny Bevalala. Nihetsiketsika tao anatin’ny sachet nisy azy ilay zaza tsy manan-tsiny ka nisarika ny mason’ny mpandalo. Zazavavikely menavana no tao mbola niaraka tamin’ny tavoniny sy ny lamba maloto niterahan’ny reniny azy. Ankoatra io, zaza mianadahy roa hafa nisy nanary teny an-tsena Antanifotsy, omaly tokony ho tamin’ny 12 ora tao Sambava. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso, napetraky ny rainy teny amin’ny sisin-dalana ireo zanany dia nilaozany teo. Hitan’ireo mponina teny an-toerana izany ka nanenjika sy niantsoantso ilay lehilahy izy ireo. Nihevitra fa hoe hadinon’io raim-pianakaviana io ireo zaza mianadahy. Nanohy ny diany anefa ilay lehilahy rehefa nantsoin’ireo fokonolona. Tsy vitsy ireo zazarano maty nesorina sy narian’ny reniny eny amin’ny dabam-pako na koa renirano fanasan-damba. Sanatria ve izany dia very ny soatoavina malagasy izay midika fa harena ny zanaka? Ankehitriny izany, dia ny ray aman-dreny indray no mahafoy zanaka fa tsy ny zanaka intsony no mahafoy ray aman-dreny. Henintsoa Hani L’article Fanarian-janaka: tsy latsaky ny telo ny tranga tao anatin’ny herinandro a été récupéré chez Newsmada.
“Ny fampandrosoana sosialy sy ny maha olona, ny fotodrafitrasa, ny fanjarian-tsakafo hijerena koa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampiroboroboana sehatrasa samihafa, ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny indostria ary ny fahaiza-manao eny anivon’ny faritra.”Ireo ny lohahevitra dimy hamantohana ny dinikasa manokana handinihana ifotony ny fampandrosoana ny any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara, ny faritra Androy sy ny faraitra Anosy, anio sy rahampitso, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa.Handray anjara amin’izany ny manampahefana eny an-toerana na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry, ny mpisehatra amin’ny sehatra tsy miankina, indrindra ny fitondram-panjakana na ny minisitra voakasika amin’izany fampandrosoana izany. Eo koa ny filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra, hitarika izany dinika izany.“Voalohany tokoa eo amin’ny tantaran’ny firenena ny handinihana akaiky sy maharitra ny fampandrosoana ny faritra atsimo”, hoy izy.R.Nd. L’article Olan’ny fotodrafitrasa, sakafo, fambolena.. : hodinihina ny fampandrosoana ny any atsimo a été récupéré chez Newsmada.